Ugwetshwe udilika jele umbulali kaZinhle Kweza | Scrolla Izindaba
Ugwetshwe udilika jele umbulali kaZinhle Kweza
IJaji libiza iNingizimu Afrika ngesizinda sokubulawa kwabesifazane ngesikathi ligweba umbulali wakwa-Eskom udilika jele.
Umuthi, uthando, amanga kanye nokufa.
Inkantolo ikuzwile konke ngesikathi kuqulwa icala likaThembinkosi Emmanuel Mhlongo lokubulala, obesebenza kwa-Eskom.
NgoLwesihlanu inkantolo ephakeme yaseGoli igwebe uThembinkosi udilika jele ngemuva kokuthi atholakale enecala lokubulala intombi yakhe uZinhle Kweza.
” Lokhu akungabazeki ukuthi unesihluku futhi nonya ngendlela enze ngayo kumuntu wesifazane ongenamandla ongakwazi nokuzivikela, ” iJaji uMakume lithe ” umufi ubeyisithandwa sakho futhi engumama wezingane zakho”.
Ummeli kaThembinkosi uSyndwell Sikhwari uzamile naye ukwethula ubufazi obuzomenza ukuthi athole isigwebo esilula.
IJaji livele lakushaya indiva lokhu lifuna ukudlulisa umlayezo ngesimo esenzekayo kokuhlukumezana ngokobulili lokhu umengameli uCyril Ramaphosa akubiza ngokuthi ” ubhubhane”
“Ukubulawa kwabantu besifazane bebulawa ngabathandana nabo kucacile manje ukuthi ubhubhane futhi yinkinga enkulu emiphakathini ,” kusho iJaji. ” Sesiphenduke izwe elibulala ebesifazane kakhulu emhlabeni wonke”
Isinqumo siphethwe cishe ngemuva kweminyaka emine uZinhle Kweza abulawa ngesihluku e-Ivory Park eduze nase-Midrand lapho ayehlala khona nomngani wakhe uPatricia Mgijima oyiphoyisa.
UZinhle wabulawa mhla zingama-30 kuNdasa ebusuku kowezi-2017 esihlalweni esingemuva semoto kaThembinkosi emnyama ebizwa ngokuthi i-Audi A3. Isidumbu sakhe satholakala sinamanxeba ambalwa ngosuku olulandelayo.
•UThembinkosi wathweswa icala lokubulala uZinhle mhla zingama-26 kuNhlangulana, ngesikathi sishicilela ividiyo engaphezulu yecala lakhe.
Umsolwa oneminyaka engama-40 ubudala onezingane eziyisithupha kwabesifazane abayisithupha abehlukene, ubengumeluleki omkhulu kwa-Eskom ehhovisi elikhulu lenkampani e-Sunninghill. Njalo uma uThembinkosi efika enkantolo wayegqoke amasudi amahle athungiwe kanye nezicathulo ezicwebezelayo.
Indoda ehlakaniphile kakhulu eneziqu ezimbili ze-Masters nomsebenzi omuhle kakhulu, uThembinkosi akakaze akhombise ukuthy unecala. ” Obekwe icala ugcine ubumsulwa bakhe kuleli cala…” Kusho iJaji.
IJaji uMakume lidlulisele ubufakazi obushaqisayo obuvela esangomeni sikaThembinkosi, esitshele inkantolo ukuthi uThembinkosi uvumile ukwakha uzungu lokubulala ngaphambi kokuthi akwenze. ” Le nkantolo ilalele ubufakazi obuvela kuMndeni Ncamphalala, oyinyanga kamsolwa ukuthi kusukela ngonyaka wezi-2015 kuya kowezi-2016 umsolwa ubesenecebo futhi edinga nosizo lwakhe ukuze akwazi ukumbulala uZinhle.